जानकारी Archives - S Khabar
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झै बिहान गरिने क्रियाकलाप अनुसार मानिसको दैनिकी सहज र असहज भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले आजैबाट तपाईंले आफूलाई सहजताका लागि बहसमा राख्नुहोस । तपाईले अपनाउने यो सतर्कताले तपाईलाई नै फाइदा पुग्ने छ । ध्यान…
जाडो मौसम शुरु भएसंगै हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारका असरहरु देखापर्न थाल्छन् । जाडो मौसममा धेरै मानिस अत्यधिक खाने, कम शारीरिक परिश्रम गर्ने तथा अत्यधिक सुत्ने गर्दछन् । कतिपय मानिस त घाम लाग्दा घाम छाड्न नखोज्ने तथा बिहान–बेलुकी कोठाभित्रै…
सजिलो, सस्तो र छिटो हुने भएकाले मोटरसाइकल लोकप्रिय यातायातको साधनमा पर्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको आँकडाअनुसार काठमाण्डौमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल गुड्छन् । यात्रा गर्न सहज भए पनि मोटरसाइकल निकै जोखिमपूर्ण यातायातको साधन हो ।…
काठमाडौं– सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानिसमा कम्प्युटर, ल्यापटप तथा स्मार्ट फोनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यस्ता विद्युतिय साधनहरुको प्रयोगलाई इन्टरनेटले थप उपयोगी बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले केही कुराको जानकारी आवश्यक पर्ने बित्तिकै मानिसहरु…
नेपालमै भेटियो ‘महादेव लुकेकाे’ अनाैठाे शिवथान ढुंगा देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नुहोला ॐ-ॐ लेखि शेयर…
तेह्रथुम जिल्लाको म्याङलुङ नगरपालिका–५ र लालीगुराँस नगरपालिका–९ को संगमस्थल पिंगुवा खोलामा रहेको शिवथान मन्दिर पौराणिक धार्मिक महत्व बोकेको मन्दिर हो । तर यो मन्दिर आवश्यक संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेको छ ।…
सावधान ! तपाईँ टाइट जिन्स लगाउँदै हुनुहुन्छ?
अहिलेको युगलाई फेशनको युग पनि भनिन्छ। मानिसहरु आफूलाई मन परेको कपडा लगाउन कन्जुस्याईँ गर्दैनन्। चाहे युवा हुन् वा युवती कपडाका धेरै सौखिन हुन्छन्। यसैबीच पछिल्लो पुस्ता जिन्स लगाउन धरै मन पराउँछन्। र उनीहरु टाइट जिन्स धेरै लगाउँछन्। तर के…
श्रीमान् श्रीमती एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । रथको एक पांग्रा विग्रिए वा नभए रथ अगाडि जान सक्दैन त्यस्तै श्रीमान् श्रीमतीबीच समस्या उत्पन्न भयो भने रथ रुपी सम्बन्धपनि अघि बढ्न सक्दैन । त्यसमा समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । त्यसैले श्रीमान्…
वाइफाई एउटा ताररहित रेडियो वेब प्रविधि हो । जसका माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुले वेब एउटाबाट अर्कोमा आदान–प्रदान गर्छन् । प्रविधिको विकाससँगै वाइफाई मानिसको आवश्यकता बन्दै गएको छ । तसर्थ, पछिल्लो समयमा वाइफाई चोरी हुने भइराखेको हुन्छ…